Abase-USA bafundiswe ngamasiko | Ilanga News
Home Izindaba Abase-USA bafundiswe ngamasiko
Abase-USA bafundiswe ngamasiko
Bebevakashele isigodlo sikaSolwazi Mkhize ukuzofunda kabanzi ngamasiko esintu
UQOPHEKE umlando esigodlweni sikaSolwazi Velaphi “VVO” Mkhize eMlambomunye, eMgu-ngundlovu ngoLwesibili emini kutheleka ithimba losolwazi nabafundi abenza i-masters kwiTheology neziqu zobudokotela baseManhattan College, e-USA beyocosha ulwazi ngamasiko.
Laba bafundi baxhunyaniswe nalesi sigodlo yi-University of KwaZulu-Natal (UKZN), njengoba uSolwazi Mkhize esebenzisana nayo. Bathe kuningi abakufundile nabakuzwile ngoSolwazi Mkhize, yikhona okubenze bahlela ukuba bazifikele mathupha esigodlweni sakhe.
Kuningi abakutshelwe ngaye kubalwa nezincwadi asezibhalile ngesiZulu abatolikelwa zona ngabanye abamnyama abahlala nabo phesheya. Indodana
kaSolwazi Mkhize, uMnu Siyabonga Mkhize – ongumphathi woMsamo Foundation, nokunguyena ongumxhumanisi wesigodlo namanyuvesi aphesheya – ekhuluma neLANGA uthe: “Mina esengike ngavakashela izinkolo eziningi emhlabeni, ngithole ukuthi kuni-ngi esidukile kukhona. Ukwenza izifundo zenkolo nokwenza i-Theology kwehluke kakhulu, iningi lethu lapha eNingizimu Afrika kasifunde lutho lwalokhu, kodwa sikholiwe, kokunye senza izifundo zezenkolo, kodwa iTheology okuyiyona ejulile, kasifundiswa yona.
“Izivakashi ezifana nalezi kazifi-kelanga nje ukuzwa ngokwelapha, kodwa zikujabulele ukuzwa ukuthi umuntu omnyama uxhumana
kanjani nethongo – okungumuntu wakubo wake waphila naye,” kusho uMnu Mkhize.
Omunye wabafundi baseManhattan College, obekhona kwabebehambele lesi sigodlo, uthe konke abakufunde khona kubama-ngalisile kwazise uSolwazi Mkhize kayikho inkolo athe uyayigxeka, kodwa zonke izinhlanga zinendlela yazo yokuxhumana noMdali, kube khona lona ophakathi nendawo – amaKristu owawo umxhumanisi okunguJesu Kristu.
Uthi bona ezweni labo sebedlulile esikhathini lapho beqhakambisa khona ukuthi usakholwa kuphi, ubone omunye ongakholwa lapho ukholwa khona umbuke njengesilima bese uzitshela ukuthi yilokhu kwakho okungcono. Uthe abantu abaningi bazibiza ngezinkolo abakuzo kunokuba bazibize
“Isibonelo:- umuntu oyiKhatholika azibize ngomKristu, kodwa ashiye ubuhlanga bakhe ngabe ethi ngingomhlophe kumbe
ngingomnyama, kodwa ngokwe-nkolo engizikhethele yona ngingumKhatholika. Akuyona
inkinga yaleli zwe kuphela lena, ngeyomhlaba jikelele,” kusho yena.
Enkulumeni eyethulwe nguSolwazi Mkhize, uthe: “Zimbili
izinto okusafanele zifu-ndwe eNingi-zimu Afrika, esingakaso-ndeli naka-ncane kuzona ukuba sizithi-nte; wukuqo-nda ukusebe-nza kwedlozi, wukuthwasa nokwelapha kwendabuko jikelele.
kalukabikhona ngalokhu, kuningi esikubhalelwe ngabamhlophe, kuningi nakithina abamnyama nabelaphi okusasidukele ngokuthi idlozi liyini, liziveza ngaziphi izindlela.
“Okokuthwasa-ke angisakuphathi ngoba mihla namalanga uthi umuntu angagula, angahlupheka kungaphumeleli izingane ekhaya, sekuthiwa thwasa.
“Into esilimazile yimfundo esinikwe yona ngamaBhunu nanamhlanje engakalungiswa. Ziningi izingane ezifundile, kodwa sithi imisebenzi kayikho, zizoyithola kanjani sikhuthaza kuzona nabazali bazo okungekhona?”
Kwenzeka lokhu nje, uDkt Mkhize uhlela umcimbi omkhulu ozoba ngomhla ka-22 kwephezulu, ozoba se-Ebandla Conference Centre, eBallito, lapho ezothula khona incwadi yakhe “Umsamo Ubizo Nokwelapha Kwendabuko.”
Kuzobe kuhlanganiswe nokugu-bha ukuzalwa kukaCredo Muthwa nokwethulwa koMsamo Awards, okuhloswe ngakho ukuklomelisa bonke abenze kahle ekuthuthuki-seni izinto zesintu, nasekwelapheni kwendabuko.
Lo mcimbi uzohanjelwa yizicukuthwane ezahlukene.
, kanti izikhulumi zosuku kuyokube kunguSolwazi Nhlanhla Mkhize wase-UKZN noNkk Thoko Mkhwanazi-Xaluva obengusihlalo wekhomishini yezamalungelo ezenkolo namasiko.
Previous articleBakhetha uJesu bayeke isikole
Next articleUseyinyama ngebala abezenyeza ngalo